उमेरसँगै मस्तिष्क सुस्त हुने
मार्च 6, 2017 मे 30, 2017 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments उमेर, मस्तिष्क
फाल्गुन २१, २०७३ । उमेरसँगै मस्तिष्क सुस्त हुने । मस्तिष्क केन्द्रिय स्नायु प्रणालीको एक महत्वपुर्ण सञ्चालक अङ्ग हो | मस्तिष्कले शरीरका अन्य अंगहरुलाई निर्देशन दिन र अन्य अंगहरुसंग समन्वय गर्न नसा र रसायनहरु प्रयोग गर्दछ। दिमाग तथा नाडीमण्डलले Neuropeptides जस्ता वस्तुहरुको माध्यमबाट छालामा रहेका रोग प्रतिरोधात्मक कोषिकाहरुलाई असर गर्दछ । छालामा रहेको यी वस्तुहले मानिसमा पार्ने मनोवैज्ञानिक दबाबका बारेमा वैज्ञानिकहरुद्वारा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
मानिसको छालाको लचिलोपन र दृढता उमेरसँगै समाप्त हुन लागेजस्तै उमेर बढ्नलादा मस्तिष्क पनि शिथिल हुन थाल्ने अध्ययनले देखाएको छ । जर्नल पीएनएएसमा प्रकाशित अध्ययनले मानिसको उमेर, मस्तिष्कको पत्र र सेरेब्रल कर्टेक्समा तनावले हाम्रो दिमागको बाहिरी पत्रको न्युरल तन्तुमा कमी देखिन्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले स्तनधारी प्रजातिको कर्टेक्सको पत्र बन्नु सर्वव्यापी नियम हो । यो आकार र आकृतिमा एकजस्तै हुन्छ ।
← नेकपा एमालेको मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियान शुरु
राजनीतिमा प्रवेश गरेका महिलाहरुमा कसको भविष्य उज्जवल होला ? →
मार्च 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक 4
फ्रेवुअरी 20, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
2 thoughts on “उमेरसँगै मस्तिष्क सुस्त हुने”
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् मस्तिष्कलाई आघात पुर्याउने १० आनी-बानीहरु
Pingback:जान्नुहोस् र हटाउनुहोस् ! यस्ता छन् मृगौला खराब गर्ने आनी-बानीहरू